Andro: 2 Oktobra 2019
Kocaeli Protocol ao amin'ny Watch Pedestrian Safety Watch
2019 dia nambara fa «Taom-pivarotana voalohany indrindra an-tongotra» hoy ny minisiteran'ny atitany. Raha ny saran'ny fifamoivoizana no tsy omena laharam-pahamehana ho an'ny mpandeha an-tongotra dia ampitomboin'ny 100, ny Kocaeli Governorship, Direction Security an'ny Kocaeli, ny Komandin'ny Gendarmerie Kocaeli ary ny Kocaeli Metropolitan Municipality. [More ...]
Vaovao tsara ho an'ny toeram-pialan-tsasatr'i ski an'i Izmir
Ny minisitry ny fambolena sy ny ala alahelo Bekir Pakdemirli, Ivotoerana Ski Bozdag. Pakdemirli, "ny taon-dasa noho ny loza ateraky ny lavanila dia hiasa amin'ny vanim-potoana ririnina amin'ny fotoana mihidy," hoy izy. Odemis dia iray amin'ireo toerana fitaterana ski lehibe indrindra ao amin'ny Faritra Aegean ho an'ny fizahan-tany amin'ny ririnina. [More ...]
Karşıyaka Ny toe-draharaha farany ao amin'ny tetikasa Tram Çiğli
Navoaka ny volana aprily Karşıyaka Ny tetikasa, izay voaomana hanitatra ny làlan'ny lalana mankany Çiğli, dia neken'ny Governemanta İzmir ary nanomboka ny fizotran'ny EIA. Izmir Metropolitan Munisipaly, noho ny fangatahan'ny olom-pirenena mba hanitatra ny làlan'ilay tramara dia mihidy randrana. ny tetikasa [More ...]
Delegation indostrian'ny fiarovana ao amin'ny Kardemir
Ny delegasiona avy amin'ny Fiadidiana ny indostrian'ny fiarovana, Karabük Iron and Steel Enterprises (KARDEMIR) AS. KARDEMİR AŞ dia nanatontosa delegasiona avy amin'ny Fiadidiana ny indostrian'ny fiarovana. Ny famokarana sy famatsiam-bolan'ny KARDEM theR ho an'ny indostrian'ny fiarovana ankehitriny [More ...]
Haydarpaşa Firaisankina: 'Haydarpaşa sy Sirkeci Fiaran-dalamby any Transfer ho any IMM'
Haydarpaşa Solidarity Haydarpaşa sy Sirkeci Train Station tamin'ny famindrana ny Istanbul Metropolitan Municipality dia nanao fanambarana voasoratra. Description; “Mangataka ny famindrana ny Haydarpaşa sy Sirkeci Station ho an'ny Istanbul Metropolitan Munisipaly izahay, raha toa ka efa ampiasaina ho an'ny tanjona voalohany sy ho an'ny besinimaro izy ireo! Haydarpasa [More ...]
Seranam-piaramanidina ao Esenboğa 1 handoa miliara dolara
Seranam-piaramanidina Esenboğa Metro 1 Handoa miliara dolara: Ben'ny tanàna ao amin'ny renivohitra Ankara Metropolitan Mansur Yavaş dia nandray anjara tamin'ny fandaharana Alt One on One Private ”Fatih Altaylı ao amin'ny TV Habertürk. Milaza ny hetsika isan'andro 200 amin'ny fandefasana mivantana, ny Ben'ny tanàna Yavaş dia nanolotra ny tetikasany ho an'i Başkent. [More ...]
Manisa Card karatra nohavaozina
MANULAŞ, departemanta iray ao amin'ny Kaominina Metropolitan Manisa, dia nanambara fa nohavaozina tao amin'ny Apple Store ny fampiharana Manisakart. Manisa Card application, izay ahafahan'ny olom-pirenena hidirana ny vaovao ilainy momba ny zotra bus ao anatin'ny sisin'ny Manisa Metropolitan ao amin'ny App Store [More ...]
Fitaterana ho an'ny daholobe miaraka amin'ny karatra famantaran'ny Elkart 3 Day maimaim-poana
Konya Metropolitan Munisipaly dia manolotra ny mpianatra hampiasa ny karatry ny mpianatra ao aminy ho toy ny Elkart amin'ny fitateram-bahoaka ary handray soa avy amin'ny fiara fitateram-bahoaka 3 maimaim-poana amin'ny fampiasana voalohany. Konya Metropolitan Municipality; Oniversite Selçuk, Necmettin [More ...]
Ny fijanonan'ny finday dia aorina eo amin'ny lalan'ny Salim Dervişoğlu, izay safidy iray amin'ny lalambe D-100, izay ampiasain'ny fiara fitateram-bahoaka mankany amin'ny distrikan'i Kocaeli's Karamürsel, Gölcük ary Başiskele. Ny voalohany naorina ho an'ny fijanonan'ny tranobam-panjakana [More ...]
FitateranaPark 12 Fitaterana mora avy any amin'ny Distrika mankany amin'ny Oniversite Kocaeli
Tiorkia tanora indrindra amin'ny fitaterana sambo Kocaeli Metropolitan Monisipaly ulaşımpark ary koa ireo sampany, 12 tanteraka avy amin'ny distrika ny Kocaeli University (lamoria) 'Inona no mahatonga ny fitaterana fanompoana. Ny kaominina Metropolitan dia manome serivisy fitaterana ao Kocaeli amin'ny alàlan'ny fiara fitaterana 336. Metropolitan, 2019-2020 ao anatin'ny fotoanan'ny fampianarana [More ...]
IETT mba hanohanana ny Tetikasa fiara mitondra fiara tsy manara-dalàna ITU
Ny talen'ny jeneralin'ny IETT dia hanohana ny tetikasan'ny fiara tsy mitondra fiara izay mikasa ny hampivoatra miaraka amin'ireo mpandray anjara iraisampirenena azy. Ny Tale Jeneralin'ny IETT, iray amin'ny mpiara-miasa ao amin'ny Kaominina Istanbul Metropolitan (IMM), dia saro-pady amin'ny tontolo iainana, loharano angovo azo antoka hanamora ny fiainana an-tanàn-dehibe. [More ...]
Fiofanana mpianatra amin'ny bisikileta amin'ny fitohanana
Ny kaominin'i Kahramanmaraş metropolitan dia nanome fiofanana bisikileta ho an'ny mpianatra any amin'ny manodidina an'i Erkenez mba hampiroborobo ny fampiasana bisikileta amin'ny fitaterana tanàna. Nandeha an-tsekoly ireo ankizy tany am-pianarana niaraka tamin'ny mpampianatra azy. Ny 23-27 Septambra ao anatin'ny faritry ny fampielezan-kevitra 'Andao handeha any am-pianarana amin'ny ankizy' natolotry ny fikambanana Healthy Cities [More ...]
Bozöyük nanandrana voampanga ho voampanga tamina tranga lozam-piarakodia
Ao amin'ny 2009 Bozoyuk fiantrana ny fiaran-dalamby izay maty seranam-piaramanidina dimy mpandeha sy ny andraikiny amin'ny alalan'ny filazana fa ny Repoblikan'i Torkia State lalamby (TCDD) dia Nanenjika rehefa afaka roa mpiasa nahazo lalana 10 taona. Amin'izao tranga mitohy izao eo alohan'ny Fitsarana Bozüyük Assize, ny TCDD [More ...]
Fametrahana ny Hanlı-Çetinkaya Fanamboarana Elektronika Fanamboarana ny fihatsarambelan'ny tany eo anelanelan'ny Tranon-tsolika Durak Bucak sy ny vaovaon'ny vaovao hafa sy ny vaovao hafaRayHaber Bulletin 25.01.2019 Tender Bulletin 25 / 01 / 2019 Tsy misy raki-tsoratra ho an'ny 25.01.2019 ao amin'ny rafitra.RayHaber 04.02.2019 [More ...]
Isan'ny Ankarakart Manodidina ny 6 tapitrisa
Nihoatra ny 6 tapitrisa ny isan'ireo Ankarakart ampiasaina amin'ny fiara fitateram-bahoaka rehetra eto an-drenivohitra. Ao amin'ny bokin'ny 2020-2024 Strategic Plan an'ny EGO General Directorate, dia misy ihany koa ny isan'ireo Ankarakart araka ny karazany. Raha ny antontam-baovao avy amin'ny EGO, 30 tamin'ny volana Jona dia mitentina 6 tapitrisa ao Ankara [More ...]
Edremit Çanakkale D550-06 Mba hisorohana ny fivontosan'ny lozam-pifamoivoizana eny an-dalana, dia nisy fivoriana natao teo ambany fitarihan'ny governemantan'ny distrikan'i Edremit Ali Sırmalı ary nisy ny fisafoana teny an-dàlana. Mba hahazoana antoka fa milamina sy tsy azo antoka ny fivezivezena ao amin'ny distrika eto amintsika, i Governor Ali Edremit District [More ...]